‘अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीका लागि विश्वसनीय सेवा र समग्र समुदायको हितका लागि एक्स्पर्ट प्रतिबद्ध छ’ – नेपाल रफ्तार
शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८ | १९:०९:४९ |
मेलबर्न : अष्ट्रेलिया तथा क्यानडामा पढ्न र बसोवास गर्न चाहनेहरुका लागि सेवा दिंदै आएको एक्स्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेजले मेलबर्नमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ। मेलबर्नमा एक्स्पर्टको पहिलेदेखि नै शाखा रहेकोमा आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्दै ग्लेनरोयमा दोस्रो शाखा संचालन गरेको हो। एनआरएन अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष एवं भिक्टोरिया संयोजक प्रेम कँडेल, एनआरएन अष्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्ष टोनु घोताने, विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजका प्रतिनिधिहरुका साथै समूदायका अगुवाहरुको उपस्थितिमा नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जनले नयाँ शाखाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
सन् २००३ मा स्थापना भएको एक्स्पर्ट एजुकेशनका अष्ट्रेलिया, नेपाल लगायत विभिन्न १३ देशमा शाखाहरु रहेका छन्। नेपाल तथा अष्ट्रेलियाका मूख्य-मूख्य सहरमा शाखाहरु रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली विद्यार्थीलाई सहज र विश्वनीय सेवाका लागि आफ्नो टिम प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ, एक्स्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेज मेलबर्नका निर्देशक सरोज शर्मा। एक्स्पर्टको नयाँ शाखा विस्तार लगायत विद्यार्थीमा कोरोना महामारीको प्रभाव, रिजनल क्षेत्रप्रतिको आकर्षण आदि समसामयिक विषयमा एक्स्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेज मेलबर्नका निर्देशक सरोज शर्मासंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
कोरोना महामारीले गर्दा नयाँ विद्यार्थी अष्ट्रेलिया आउन सकिरहेका छैनन्, यहाँ बसिरहेका विद्यार्थीहरु पनि अहिले अन्योलमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सीहरु किन आफ्नो शाखा विस्तारमा लागिरहेका छन् ?
शाखा विस्तार भनेको तत्कालिन अवस्थाका लागि मात्र नभई दिर्घकालिन योजना पनि रहन्छ। मेलबर्नमा एक्स्पर्ट एजुकेशनले सेवा दिन शुरु गरेको दश वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। ग्लेनरोयमा अहिले नेपालीहरुको जनसंख्या बढिरहेको छ, त्यस्तै अन्य देशका विद्यार्थीहरुको संख्या पनि यहाँ तुलनात्मक रुपले बढी देखिन्छ। त्यस हिसाबले विद्यार्थीहरुलाई सहज र छरितो सेवा मिलोस् , विद्यार्थी र हामीबीचको विश्वास बढोस्, सद्भाव बढोस् भन्ने उद्देश्यले ग्लेनरोयमा शाखा खोल्ने निर्णय गरेका हौँ। अर्को कुरा, अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरु भिसा सकिएको अवस्थामा के गर्ने, पीआर भिसाको लागि कसरी अगाडी बढ्ने भनेर अन्योलमा छन्। त्यसका लागि यो नयाँ शाखा विस्तारले पक्कै पनि विद्यार्थीलाई सहज र विश्वसनीय सेवा मिल्नेछ। र, यहाँबाट विद्यार्थीलाई ट्याक्स एडभाइजरीको पनि सेवा मिल्नेछ। त्यसैगरी, हामी अष्ट्रेलियाका लागि मात्र नभई क्यानडा जान चाहनेहरुका लागि पनि सेवा दिंदै आएका छौं।
पीआरको कुरा उठाउनुभयो, अहिले विद्यार्थीहरु पीआरकै लागि रिजनल गइरहेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरुले पीआर पाउन रिजनल नै सही विकल्प हो त ?
विद्यार्थीहरु अहिले एजुकेसन र माइग्रेसनमा आएका विभिन्न नियम परिवर्तनले गर्दा अन्योलमा छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको अन्योलतालाई चिर्न सही सुझावको खाँचो छ। विद्यार्थीको व्यक्तिगत रुची, उसको लक्ष्य, आर्थिक अवस्था सबैकुरा बुझेर पीआरको लागि मात्र नभई उसको करियर अगाडी बढ्न सक्नेगरी सही सुझाव दिनुपर्छ। र, विद्यार्थीले पनि रिजनल नै एकमात्र विकल्प हो भनेर बस्नुहुँदैन।
विद्यार्थीबाट कन्सल्टेन्सीले सही सुझाव दिएनन् भन्ने गुनासा र प्राय: जसो कन्सल्टेन्सीमाथि आलोचना आइरहेका हुन्छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो क्षेत्र भनेको एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो। हामीले कसैको जीवनलाई गती दिनका लागि सहयोग पुर्याउन सुझाव दिइरहेका हुन्छौं। त्यसरी सुझाव दिंदा तत्कालिन परिस्थितिले त प्रभाव पार्छ नै, तर हामीले त्यसको दिर्घकालिन प्रभाव पनि सोंच्नुपर्ने हुन्छ। केहीले त्यो दिर्घकालिन प्रभावलाई ख्याल नगरी सुझाव दिंदा, केहीले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेर विद्यार्थीसंग कुरा गर्दा विद्यार्थीमा नराम्रो असर पर्न जान्छ। सबैले आफ्नो व्यवसायिक नैतिकतालाई ख्याल राखेर काम गरौँ। अर्को कुरा, यदि विद्यार्थीको भविष्य नहेरेर आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्यौं, विद्यार्थीलाई खुसी बनाउन सकेनौं भने हाम्रो आफ्नो व्यवसाय पनि त अगाडी बढ्ने बाटो रहन्न। आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरौँ।
जिम्मेवारीबोधको कुरा गर्दा, कोरोना महामारीमा विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नका लागि एक्स्पर्टले कस्ता-कस्ता पहल गर्यो ?
विद्यार्थीलाई अहिले हामीले सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिइरहेका छौं। यो भनेको कोरोना महामारीको चपेटामा परेको समयमा विद्यार्थीका लागि केही राहत महसुस होस् भनेर गरिएको हो। त्यस्तै, महामारीकै समयमा एक्स्पर्टले २ लाख ५० हजार अष्ट्रेलियन डलर जम्मा गरेर आफ्ना विद्यार्थी मात्र नभई सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि सहयोग वितरण गरेको थियो।
यी बाहेक विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासका लागि एक्स्पर्टले कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?
हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई सेवा दिंदा यो कुरामा ख्याल त राख्छौं नै, सामुदायिक स्तरमा गएर पनि हामीले आफूले सक्ने सहयोग गरिरहेका छौं। स्पोर्ट्स क्लब, खेलका विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगितामा प्रायोजन गर्दै आएका छौं। खेलप्रति रुची भएका विद्यार्थीहरुका लागि हौसला मिलोस् भनेर नै हामीले प्रयोजन गर्ने गर्छौं। त्यसैगरी, अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि प्रायोजन गरेर हामीले विद्यार्थीलाई मनोरंजन तथा व्यक्तित्व विकासमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका छौं।
अष्ट्रेलियामा आएर यसरी आफ्नो व्यक्तित्व विकास, करियर विकासमा लाग्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरु अहिले आउन पाइरहेका छैनन् ? उनीहरुका लागि कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
विभिन्न राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउनका लागि पहल गरिरहेकै छन्। तर अहिले टुंगो नलागिसकेकोले कहिले खुल्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्दपी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु यहाँको अर्थतन्त्रका लागि पनि बलियो खम्बा भएका कारण विद्यार्थी ल्याउने व्यवस्था यहाँको सरकारले छिट्टै गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। त्यतिन्जेल नेपालमै रहेर अनलाइन पढ्न पनि सकिन्छ। तर त्यो फेस टु फेस पढेजस्तो हुँदैन। त्यसैले केही समय धैर्य गरौँ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। नेपालमा विकराल रुपले फैलिएको छ। सबैले आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सी मात्र यो महामारीमा परेका होइनौं। सबै क्षेत्रमा उत्तिकै असर परिरहेको छ। आशा गरौँ, छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्किनेछौँ।
अन्त्यमा, थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
एक्स्पर्ट अहिले जहाँसम्म आइपुगेको छ, हाम्रो समग्र टिमको मेहनत, विद्यार्थी तथा अभिभावकको विश्वास र शुभचिन्तकको साथका कारण हो। सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंहरुको यही विश्वास र साथले गर्दा नै नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएका छौं। हामी हजुरहरुको सेवामा सधै तत्पर छौं। आफ्ना सुझाव दिनुहोस्, यसरी नै विश्वास र साथ कायम रहोस्।
यस्तो छ आजको तपाइको भाग्यफल ?